ကမ္ဘာ့ဈေးအကြီးဆုံး Ice Cream က ဘယ်လောက်တောင် ဈေးကြီးလဲ? | yathar Magazine
ကမ္ဘာ့ဈေးအကြီးဆုံး Ice Cream ကို Dubai နိုင်ငံက Scoopi Café ဆိုင်လေးမှာ ရောင်းချတာဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ဈေးအကြီးဆုံး Ice Cream ရဲ့ နာမည်က “ Black Diamond “ ဖြစ်ပြီးတော့ Ice cream ပုံစံလေးကို မြင်တာနဲ့ ဝိုးခနဲဖြစ်သွားအောင် ကြွေဆင်းရပါတယ်။
ဒီ Black Diamond ice cream လေးရဲ့ တန်ဖိုးက Dhs 3,000 ဒါမှမဟုတ် $817 ကျသင့်ပါတယ်။ မြန်မာငွေနဲ့ဆိုရင် ပျမ်းမျှ ၁၀ သိန်းကျော်ပါတယ်။ Dubai နိုင်ငံရဲ့ Media တွေကြောင့် ဒီ Black Diamond ice cream က ကမ္ဘာ့ဈေးအကြီးဆုံး Ice Cream အဖြစ် မှတ်တမ်းအတင်ခံရပါတယ်။
ဒီ Ice cream လေးက ဘာ့ကြောင့်ဒီလောက်တောင် ဈေးကြီးရတာလဲ?
ဒီ Ice cream မှာ အသုံးပြုထားတဲ့ ပါဝင်ပစ္စည်းတွေက ဈေးအကြီးဆုံးအရာတွေနဲ့ အသုံးပြုထားပြီးတော့ ရွှေ ၂၃ ကာရက် ကို Ice cream အပေါ်ပိုင်းထိပ်လေးမှာ ထည့်ပေးထားပါတယ်။
ဒီ Ice Cream လေးကို Madagascar vanilla ice creamရယ်၊ ဈေးအရမ်းကြီးတဲ့ Iranian saffron ကိုလည်းအသုံးပြုထားပါတယ်။ ပြီးရင်တော့ black Italian truffleနဲ့ အလှဆင်ထားတဲ့ ဒီ Black Diamond ice cream လေးက ပုံလေးကို မြင်တာနဲ့ သွားရည်တောင်ကျချင်နေပါပြီ။
ဒီလောက်ဈေးကြီးတဲ့ Black Diamond Ice Cream ကို ပြုလုပ်ရန်ကြာချိန်က ၅ ပတ်တောင်ကြာပါတယ်။ Ice cream ထည့်ပေးတဲ့ Versace bowl နဲ့ Versace spoon ကို စားပြီးရင် တစ်ခါတည်း ကိုယ်တိုင်ယူသွားလို့ပါတယ်။
ဒီလောက် ဈေးကြီးတဲ့ Ice Cream ကို အစားတလိုင်းလေးတွေဆိုရင်ရော စားကြမလား?
ကမ်ဘာ့စြေးအကွီးဆုံး Ice Cream က ဘယျလောကျတောငျ စြေးကွီးလဲ?
ကမ်ဘာ့စြေးအကွီးဆုံး Ice Cream ကို Dubai နိုငျငံက Scoopi Café ဆိုငျလေးမှာ ရောငျးခတြာဖွဈပါတယျ။ ကမ်ဘာ့စြေးအကွီးဆုံး Ice Cream ရဲ့ နာမညျက “ Black Diamond “ ဖွဈပွီးတော့ Ice cream ပုံစံလေးကို မွငျတာနဲ့ ဝိုးခနဲဖွဈသှားအောငျ ကွှဆေငျးရပါတယျ။
ဒီ Black Diamond ice cream လေးရဲ့ တနျဖိုးက Dhs3,000 ဒါမှမဟုတျ $817 ကသြငျ့ပါတယျ။ မွနျမာငှနေဲ့ဆိုရငျ ပမျြးမြှ ၁၀ သိနျးကြျောပါတယျ။ Dubai နိုငျငံရဲ့ Media တှကွေောငျ့ ဒီ Black Diamond ice cream က ကမ်ဘာ့စြေးအကွီးဆုံး Ice Cream အဖွဈ မှတျတမျးအတငျခံရပါတယျ။
ဒီ Ice cream လေးက ဘာ့ကွောငျ့ဒီလောကျတောငျ စြေးကွီးရတာလဲ?
ဒီ Ice cream မှာ အသုံးပွုထားတဲ့ ပါဝငျပစ်စညျးတှကေ စြေးအကွီးဆုံးအရာတှနေဲ့ အသုံးပွုထားပွီးတော့ ရှေ ၂၃ ကာရကျ ကို Ice cream အပျေါပိုငျးထိပျလေးမှာ ထညျ့ပေးထားပါတယျ။
ဒီ Ice Cream လေးကို Madagascar vanilla ice creamရယ်၊ ဈေးအရမ်းကြီးတဲ့ Iranian saffron ကိုလည်းအသုံးပြုထားပါတယ်။ ပြီးရင်တော့ black Italian truffle နဲ့ အလှဆင်ထားတဲ့ ဒီ Black Diamond ice cream လေးက ပုံလေးကို မြင်တာနဲ့ သွားရည်တောင်ကျချင်နေပါပြီ။
ဒီလောကျစြေးကွီးတဲ့ Black Diamond Ice Cream ကို ပွုလုပျရနျကွာခြိနျက ၅ ပတျတောငျကွာပါတယျ။ Ice cream ထညျ့ပေးတဲ့ Versace bowl နဲ့ Versace spoon ကို စားပွီးရငျ တဈခါတညျး ကိုယျတိုငျယူသှားလို့ပါတယျ။
ဒီလောကျ စြေးကွီးတဲ့ Ice Cream ကို အစားတလိုငျးလေးတှဆေိုရငျရော စားကွမလား?
Hangover ဖွဈရငျ အကမြနာစဖေို့